कुवेतमा कोभिड केस बृद्धि हुने सम्भावना तर बन्द लकडाउन नहुने — Himalisanchar.com
कुवेत सिटी-कुवेतमा महामारीको अवस्था राम्रो भएकाले देशमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्यामा ठूलो उछाल आए पनि विमानस्थल र बन्दरगाह बन्द गर्ने र कर्फ्यू वा तालाबन्दी गर्ने कुनै योजना छैन। विश्वभर ओमिक्रोन संक्रमण फैलिएको प्रकाशमा संक्रमणमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।
अल-कबास दैनिक रिपोर्ट गर्दछ। स्रोतहरूले भन्यो अहिले सम्मका लक्षणहरू हल्का छन्। कहिले कहि तलमाथि हुन्छ। अहिले जीवनको ढाँचा परिवर्तन गर्ने कुनै इच्छा छैन। महामारीको गम्भीरता निर्णायक कारक मृत्युको उच्च संख्या र सघन हेरचाह केसहरूमा निहित छ। जुन कुवेतमा सामान्य स्तरमा छन्।
स्रोतहरूले स्थानीय रूपमा भाइरसको गतिविधिले अर्को फेब्रुअरीको शुरुवातसम्म संक्रमणको दैनिक दरमा निरन्तर वृद्धि हुने सम्भावनालाई संकेत गरेको छ। त्यसपछि यो क्रमशः घट्न थाल्छ। स्रोतहरूले संक्रमणको बढ्दो संख्याले आतंकको आवश्यकता नरहेको बताए। किनभने अस्पताल भर्ना अझै स्थिर छ।
यद्यपि यदि भाइरसबाट संक्रमित व्यक्तिको संख्या बढ्दै गएमा अस्पताल भर्ना हुनु आवश्यक छ भने नयाँ सरकारी उपायहरू लिइनेछ। विशेष गरी मस्जिदहरूमा पूजा गर्नेहरू बीचको सामाजिक दुरी शिक्षा र बन्द ठाउँहरूमा स्वास्थ्य प्रोटोकलहरूको आवेदनलाई कडाई गर्ने।
जे होस सरकारले अहिले बुस्टर डोज दिने र ५ देखि ११ वर्षसम्मका बालबालिकालाई खोप लगाउने कामलाई तीव्रता दिने क्रममा रहेको स्रोतले संकेत गरेको छ। जुन खोप आउनेबित्तिकै यही महिनाको अन्त्यमा सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
मुलुकमा महामारीको प्रकोप नियन्त्रणका लागि सरकारले कोरोना आपतकालीन समितिलाई पेश गर्न सक्ने कुनै पनि सुझाव कार्यान्वयन गर्ने स्रोतले जोड दिएको छ। सोही क्रममा सरकारी निरीक्षण टोलीले स्वास्थ्य ऐन उल्लंघन गरेको पाइएमा कुनै पनि सुविधा बन्द गर्ने र सामाजिक सञ्जालमा अफवाह फैलाउनेलाई दण्ड गर्न कटिबद्ध छन्।
क्याफेहरूमा हुक्का प्रतिबन्ध लगाउने मस्जिदहरूमा सामाजिक दुरी लागू गर्ने। अनलाइन अध्ययनमा फर्कने र सरकारी शिफ्टहरू घटाउने जस्ता सावधानीका सिफारिसहरू निम्न अपेक्षित छन्।
ओमिक्रोन भाइरसको द्रुत प्रसार आतंकको कारण होइन। बरु सावधानी र स्वास्थ्य आवश्यकताहरूको निरन्तर पालना हुनुपर्छ। यस सम्बन्धमा भाइरसको सामना गर्न सर्वोच्च सल्लाहकार समितिका प्रमुख डा. खालिद अल-जरल्लाहले अल-राईलाई भने संक्रमणको दर उच्च छ। र त्यहाँ उत्परिवर्तित लहरको साथ संक्रमणको वक्रमा तीव्र वृद्धि भएको छ।
हामी भन्दा पहिलेका देशहरू तर उनले आश्वस्त पारे कि अहिले पनि अधिकांश संक्रमणहरू माथिल्लो श्वासप्रश्वास प्रणालीका लक्षणहरूका लागि हुन्। यसको गम्भीरता प्रतिरक्षा र प्रतिरक्षा अनुसार, र सबै केसहरूको लागि रिकभरी घर भित्र छ।
कुवेतमा महामारीको अवस्था बिग्रिएको स्वास्थ्य स्रोतले गत जुलाईमा १ हजार ९ सय ९३ जनामा ​​संक्रमण देखिएको उल्लेख गरे पनि त्यतिबेलाको सघन उपचार कक्षमा रहेका व्यक्तिको संख्या ३१० लाख १ सय ५० थियो। वार्डहरू, र २० दैनिक मृत्युहरू अहिले भन्दा फरक छन्, र सक्रिय केसहरूको संख्या हिजो ८०८८ विरुद्ध १८६०० थियो।
यद्यपि, स्रोतहरूले स्वास्थ्य प्रोटोकल, सामाजिक दूरी र एन्टिभाइरस खोपको (तेस्रो) डोज प्राप्त गर्ने पहलको महत्त्वमा जोड दिए र आतंक र डरको अवस्था विगतको कुरा भएको बताए। आजको आवश्यकता भनेको इपिडिमियोलोजिकल इन्डेक्सको स्तरको स्थिरता कायम राख्न र यसलाई बिग्रन नदिन सावधानीको स्तर बढाउनु हो।
डा अल-जरल्लाहले जोड दिए कि भेलाहरू बेवास्ता गर्ने। रोकथाम उपायहरूको पालना गर्ने, खोपको खुराक प्राप्त गर्ने र लक्षणहरू महसुस हुँदा घरमा अलगाव, र स्वास्थ्य निर्देशनहरूको पालनाले नियन्त्रण प्रयासहरूलाई समर्थन गर्दछ र रिकभरी चरणलाई गति दिन्छ। स्वास्थ्य मन्त्री डा खालेद अल-सईदलाई कोभिड-१९ पोजिटिभ देखिएको र अहिले आइसोलेसनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले बिहीबार जनाएको छ।
मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा डा. अल-सइदको स्वास्थ्य राम्रो रहेको र सङ्क्रमण भएको अवस्थामा स्वास्थ्य अधिकारीहरूले तोकेको प्रोटोकल पालना गरेको पुष्टि गरेको छ।उहाँले टाढैबाट आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न जारी राख्नुहुनेछ, विज्ञप्तिमा पुष्टि भएको छ। कोभिड-१९ मन्त्रीस्तरीय आपतकालीन समितिले आफ्ना सिफारिस र प्रस्तावहरू मन्त्रिपरिषद्को आगामी बैठकमा पठाएको एक अधिकारीले बिहीबार बताए।
कुनासँग कुरा गर्दै सेन्टर फर गभर्नमेन्ट कम्युनिकेसन (सीजीसी) का प्रमुख तारेक अल-मेजरेमले भने कि सेफ प्यालेसमा उपप्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्री शेख हमाद जाबेर अल-अली अल-सबाहको अध्यक्षतामा समितिको बैठक महामारीको बारेमा केन्द्रित थियो। स्थानीय स्तरमा विकास र कसरी कोभिड-१९ केसहरूको द्रुत संख्यालाई रोक्न स्वास्थ्य उपायहरू लागू गरियो।
स्वास्थ्य र शैक्षिक अधिकारीहरूले आफ्नो क्षेत्रहरूमा पछिल्लो घटनाहरूको समितिलाई अपडेट गरे।अल-मेजरमले खुलासा गरे, सबै प्रस्तावहरू अब छलफल र निर्णयहरूको लागि क्याबिनेटको अर्को बैठकमा पठाइएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले बिहीबार दिएको जानकारी अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा २ हजार ४१३ जनामा ​​कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) पोजिटिभ देखिएपछि कुवेतमा संक्रमितको संख्या ४२५ हजार ५५ पुगेको छ।
रिकभरीहरू २६४ बाट बढेर ४१२७४९ पुगेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डा अब्दुल्ला अल-सनदले भने, रिकभरीहरूले समग्र संक्रमणको ९७ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्दछ। शून्य मृत्युका घटनाहरू दर्ता भएका छन्, कुल मृत्युको संख्या २,४६९ रहेको छ, उनले कुनालाई भने।
कुवेतमा क्रीयाशिल तीन किराती संस्थाले संयुक्तरुपमा उभौली मनाउने
जजिरा एयरलाइन्सको कुवेत भैरहवा सिधा उडानकाे उद्घाटन
बेइजिङका वफादार जोन ली हङकङको कार्यकारीमा निर्वाचित
लुम्बिनि समाज नेपाल कुवेतकाे नवाै बार्षिक उत्सव तथा भलिवल प्रतियोगिता जुन ३ मा हुने